सर्प माताले सर्प नचाउदै गरिन बिरामीको उपचार ! अस्पतालले नसकेको बि*रामीहरुको यसरि लाग्यो भिड (हेर्नुस् भिडियो) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/सर्प माताले सर्प नचाउदै गरिन बिरामीको उपचार ! अस्पतालले नसकेको बि*रामीहरुको यसरि लाग्यो भिड (हेर्नुस् भिडियो)
सर्प माताले सर्प नचाउदै गरिन बिरामीको उपचार ! अस्पतालले नसकेको बि*रामीहरुको यसरि लाग्यो भिड (हेर्नुस् भिडियो)
आफुलाई ‘काली माता’ नामले चिनाउदै आएकी फुल कुमारी तमाङ्ग जोरपाटीमा बस्छिन । उनले अपाङ्ग देखि मुटुमा प्वाल भएका ठुला ठुला बिरामीलाई समेत उपचार गर्दै आएकी बताउछिन । घांटीमा ठुलो सर्प बेरेर बसेकी काली माताकोमा धेरै भक्तजन समेतको घुइचो लाग्ने गर्छन ।
बिरामीहरु माता प्रति खुसि भएको आफुहरुलाई लागेको रोग समेत निको भएको बताउछन । आफुले गरेको उपचार ठिक नभए पैसा फिर्ता समेत गर्छिन उनि । कुनै दिन दुखि आए भने उनले निशुल्क उपचार समेत गर्दै आएकी छिन । केहि समय अघि उनिमाथि ठगीको आ’रोप लागेको थियो । तर आफुले अहिलेसम्म कसैलाई नठगेको उनले बताएकी थिईन् ।
अहिले पनि उनले आफु कहाँ आउने धेरै बिरामीलाई निको पर्दै आइरहेकी छिन् । क्यान्सर लागेका बिरामीले पनि उनले उपचार गरेपछि ठिक भएको बताएका छन् । अस्पताल धाएर र धेरै खर्च गर्दा पनि ठिक नभएका बिरामीहरु उनि उनि कहाँ आउन थालेपछि अहिले भिड नै लागेको छ । हेरौँ उनै सर्प माताले सर्प नचाउदै बिरामीको उपचार गरेको भिडियोमा ।
एउटा गीत हिट भएर कोच बन्यो भन्नेलाई आस्थाको कडा जवाफ, प्रहरीमा केस गर्दै (भिडियो)
आफ्नै कार्यक्रममा ऋषी धमलाको मजाक उडाइए पछि ऋचाले दिइन् यस्तो प्रतिकृया (भिडियो हेर्नुस्)
हेमाको बिरोधमा बोल्दै जंगलमा गाजा खाको तस्बिर भन्दै मोबाइलमा देखाउने आखिर को हुन यिनी ? (भिडियो)
हेमाले धेरै नाटक गर्छे, अर्काको घरमा छिर्नु अघि आफ्नो घर बनाउ ! प्रहरीले पि’ट्नुको रहश्य खुल्यो (भिडियो सहित)